संसारकै अनौठा घरहरु (फोटोफिचर) - IAUA
एजेन्सी , अनौठो र भब्य घर बनाउने परम्परा प्राचिन कालदेखि चल्दै आएको छ । संसारमा भब्य दरबार बनाउने बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ हो । तर संसारमा यस्ता घरहरु छन् जुन हेर्दै आश्चर्य जनक लाग्ने गर्दछ । अनौठो डिजायनमा बनेका ती घर बिकसित देशको प्रा:य बने गरेका छन् । आज हामी बिश्वका अनौठो मोडलका घरको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।
1. Mahanakhon Tower, Bangkok, Thailand
2. Polygone Riviera, France
3. Riverside Museum, Glasgow, UK
5. Dc Tower I, Vienna, Austria
6. The National Library Of Belarus, Minsk, Belarus
7. Hallgrímskirkja, Reykjavík, Iceland
8. Oakley Headquarters, Foothill Ranch, Lake Forest, USA
9. Basque Health Department Headquarters In Bilbao, Spain
11. Atomium, Brussels, Belgium
12.The Timmelsjoch Experience Pass Museum, Brenner Pass, Italy
Previous Previous post: महिलाले ब्रा र पेन्टी नै लगाउन नपाइने देश
Next Next post: सपनाको शहर कोरिया कहर वास्तविक जीवन भोगाई सुष्मा राई